प्रचारप्रसारलाई किन मन पराउँदैनन् दयाहाङ राई ? « Janata Times
काठमाडौं, ३ कात्तिक । अभिनेता दयाहाङ राई अभिनयकै कारण चर्चामा आउने गर्नुहुन्छ । उहाँले निर्वाह गर्नुभएको लुटको गोफ्लेदेखि कबड्डीको काजीसम्मको भूमिका दर्शकमाझ लोकप्रिय छ । फिल्म लुटबाट आफ्नो परिचिय स्थापित गर्नुभएको दयालाई कबड्डीले अर्को उपनाम ’काजी’ दिन सफल भएको थियो ।
दयाको फ्यान फ्लोअर्स पनि यिनै फिल्म बढाएकोमा कसैको दुईमत नहोला । थियटर हुँदै फिल्ममा आएका दया अभिनयमा पोख्त अभिनेतामध्येका एक हुन् । तर, उहाँ प्रचारप्रसारमा त्यति धेरै देखिँनु हुँदैन । साथै, उहाँलाई प्रचारप्रसारमा समय नदिने कलाकार भनेर केही निर्माताले आरोप पनि नलगाएका होइनन् ।
आखिर किन दया प्रचारप्रसारमा टाढिन्छन् त ? दया भन्नुहुन्छ, ‘आफ्नो कामको आफैँले बयान गर्ने कुरा मलाई निकै गाह्रो लाग्छ ।’ उहाँले थप्नुभयो ‘कामको प्रतिक्रिया लिएर बहस गर्न सकिन्छ । तर, आफ्नो कामको एकोहोरो बखान गर्नु राम्रो होइन ।’ उहाँले आफूले गरेको भूमिकालाई दर्शकले मुल्यांकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘हामीले दर्शकको महत्वकांक्षा बढाउने गरि प्रचारप्रसार गर्नु हुँदैन’, दया भन्नुहुन्छ, ‘त्यसैले म एकोहोरो प्रचारप्रसारमा धेरै सक्रिय छैन ।’
तर, उहाँ दर्शकसमक्ष भने पुग्नेमा दुईमत राख्नुहुँदैन । ‘दर्शकसँग पुग्दा कन्टेन होस् र त्यसमा तर्कवितर्क गर्न पाइयोस्’, दया भन्नुहुन्छ, ‘अब दर्शकलाई कन्टेन चाहिएको छ न कि बखान ।’ कलाकारले काममै विश्वास राख्नुपर्छ भन्ने सोच्ने दया निकट भविष्यमै फिल्म निर्देशन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ।
नाटक निर्देशन गरिसक्नुभएको उहाँले फिल्म कहिले निर्देशन गर्छन् ? यो भने पर्खाइकै विषय छ । यसका साथै उहाँ ‘कबड्डी ४’ को छायांकनको तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई ’काजी’ उपनाम दिएको कबड्डीको चौथो भागलाई ’फाइनल म्याच’ भनिएको छ । मौसमले साथ दिए छायांकन टिमसहित उहाँ यसैसाता मुस्ताङ पुग्नुहुनेछ ।
माइकल : पाँच हजार महिलासँग ‘यौन सम्बन्ध’ को सूची
वाशिंगटन । अमेरिकाका एक करोडपतिले एउटा कथित सूची तयार गरेका छन्, जसमा आफुले यौन सम्बन्ध
‘चपली हाइट-३’को ट्रेलर सार्वजनिक (हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडौं, ३ मंसिर । अर्जुनकुमारको निर्माण रहेको फिल्म ‘चपली हाइट ३’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको
ज्योतिष शास्त्र अनुसार यस्ता हुन्छन् राती जन्मिने मानिसहरु
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार जन्म समयको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको समय थाहा पाउन सकिन्छ । तपाईंलाई